Internship Archives - Intern Plus
Advantages of Internship 💁‍♀️ဒီနေ့မှာတော့ Intern Pluser တို့ကို Internship ဆင်းခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ပြောပြပေးမယ်နော်။ Internship(အလုပ်သင်ဆင်းခြင်း)ဆိုတာဟာ...
Zin Wai Wai Htun
Pandemic ကာလကြီးမှာ တစ်နေကုန် အိမ်ထဲမှာပဲနေနေရတော့ ငြီးငွေ့ပြီး တစ်နေ့တစ်နေ့ Repetitive Tasks တွေပဲလုပ်နေရလို့ Capacity ကျနေတယ်လို့ ခံစားနေရပြီလား❓...
Professional ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေမယ့် 10,000 Hours Rule
Professional ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေမယ့် 10,000 Hours Rule လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ Life Goal တွေအသီးသီးရှိကြပါတယ်။ ကမ္ဘာပတ်ခရီးသွားနိုင်ဖို့၊ ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုတစ်ခု...
ညဘက် အိပ်မပျော်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
ညဘက် အိပ်မပျော်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ❓ 👦လူငယ်တွေအနေနဲ့ အခုခေတ်မှာ နေရာအစုံကလာတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့် အိပ်မပျော်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ကြပါတယ်။ ဒီ ညအိပ်မပျော်တဲ့ ပြဿနာဟာ...
နေ့ရက်တိုင်းမှာ ပျော်ရွှင်စေဖို့🙂 ======= Intern Pluser တို့ရေ နေ့ရက်တိုင်းမှာ ပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ဖို့အတွက် ဒီအချက်လေးတွေကို လိုက်နာပြီး လုပ်ကြည့်ပါနော်👇👇 ✅အကောင်းမြင်တတ်ဖို့အတွက်...
2021 အတွက် New Year Resolution တွေအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား?
🥳 2021 အတွက် New Year Resolution တွေအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား❓ Intern pluser တို့ရေ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ကြီးကတော့...
လုပ်ငန်းခွင်စမဝင်ခင် အတွေ့အကြုံ ဘယ်လိုရှာမလဲ?
Candidates, Career Advice, Internship
အတွေ့အကြုံ မရှိသေးဘဲ လုပ်ငန်းခွင်စဝင်ဖို့ ဒါတွေပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုမယ်နော် အလုပ်ခန့်တဲ့အခါ လျှောက်ထားသူရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ကြည့်ပြီး ခန့်ကြတာကို အားလုံး သိပြီးသားဖြစ်ကြမှာ။...
လူငယ်တွေ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ရောက်စေဖို့ အချက် (၅) ချက်
လူငယ်တွေ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ရောက်စေဖို့ အချက် (၅) ချက် Intern Pluser တို့ရေ ဘဝမှာ ကိုယ်မှမဟုတ်ဘူး လူတိုင်းက...